ऐतिहासिक सेन्टोसा शिखर वार्ता विश्व शान्तिको यात्रा | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / ऐतिहासिक सेन्टोसा शिखर वार्ता विश्व शान्तिको यात्रा
ऐतिहासिक सेन्टोसा शिखर वार्ता विश्व शान्तिको यात्रा
Posted by: युगबोध in विचार June 13, 2018	0 127 Views
अमे रिकी राष्ट्रपति डो नाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली सर्वाेच्च नेता किम जो ङ उनबीच मंगलवार सिंगापुरमा ऐ तिहासिक शिखरवार्ता सम्पन्न भएको छ । पहिलो शिखर वार्तामा दुबै ने ताले संयुक्तरुपमा एक सम्झौ तापत्रमा हस् ताक्षर गरे का छन् । सम्झौ तामा ट्रम्पले उत्तर को रियाको सुरक्षाको ग्यारे न्टी गरे का छन् भने त्यसको बदलामा किमले आणविक निशस् त्रीकरणको पानमुनजो ङ घो षणापत्रमा पुनः प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सन् १९४५ पछि चिसिएको सम्बन्ध शिखर वार्ताले पुनः जो ड्ने प्रयास गरे को छ । औ पचारिकरुपमा सन् १९५३ मा शत्रुतापूर्ण युद्ध यात्रामा भिडिरहे का दुई मुलुकको सम्वन्धमा सन् २०१८ को पूर्वाद्र्धमा आइपुग्दा सुधारको संके त दे खिएको छ ।
दक्षिण को रियाली राष्ट्रपति मुन र उत्तर को रियाली ने ता किमबीच अप्रिल २७ मा पान्मुन्जो म शिखर वार्ताले अमे रिका उत्तर को रियाबीचको नया“ सम्बन्ध शुरुवात गर्ने आधार तय गरे को थियो  । विश्व युद्धका मुख्य कारक मानिएका यी मुलुकबीच भएको शिखर वार्ताले विश्व राजनीतिमा नया“ आयामको तरंग पै दा गरे को छ । लामो समय युद्धमा हो मिएका मुलुकबीच औ पचारिकरुपमै भएको शिखरवार्तालाई ऐ तिहासिकरुपमा हे रिएको छ । साढे ६ दशक लामो शत्रुतापूर्ण सम्बन्धलाई से न्टो सा शिखरवार्ताले नया“ अध्यायको शुरुवात गरे को छ । विश्वको ध्यान आकर्षित गरे को से न्टो सा शिखरवार्ताले दुबै दे शबीच सम्बन्ध सुधारलाई लिपिबद्ध गरे को छ । शिखरवार्तामा दुबै ने ताले चारबुदे सम्झौ ता गरे का छन् । ६ महिनाअघिसम्म एकअर्कालाई सिध्याउनका लागि यो जना बनाउने अमे रिका र उत्तर को रियाका ने ताहरुले मंगलवार सिंगापुरमा ऐ तिहासिक रुपमा हात मिलाएका छन् र को रियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापनाका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ट्रम्प र किमबीच भएको सम्झौ तामार्फत विश्व शान्तिको यात्रालाई साझा लक्ष्य बनाइएको छ । दुबै ने ताबीच भएको चारबुदे सम्झौ ता यस्तो छ–
१. शान्ति र समृद्धिका लागि सम्झौ ताको पहिलो बुदा दुई दे शबीच नया“ शिराबाट दुबै दे शका जनताको चाहनाअनुरूप सम्बन्ध स् थापना गनेर् प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
२. को रियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स् थापनाका लागि आवश्यक पहल गनेर् र नया“ढंगले अगाडि बढाउने र पुराना प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गनेर्  ।
३. गत अप्रिलमा अन्तर को रियाली शिखर सम्मे लनका बे ला भएको आणविक निःशस् त्रीकरणलाई कार्यान्वयन गनेर्  । पानमुन्जो म घो षणापत्रमा उत्तर को रियाली ने ता किम र दक्षिण को रियाली राष्ट्रपति मुन जाय इनबीच भएको सम्झौ तालाई कार्यान्वयन गनेर्  ।
४. को रियाली युद्धका क्रममा बन्दी बनाइएका युद्धबन्दीहरुलाई स् वदे श फिर्ती तथा परिपूरणको सहमति भएको छ ।
अमे रिका–उत्तर को रियाबीच नया सम्बन्ध स्थापना गनेर् र को रियाली प्रायद्वीपमा स् थायी, मजबुत र शान्तिपूर्ण शासन व्यवस् था स् थापना गनेर् विषयमा राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर को रियाली ने ता किम जो ङ उनले विस् तृत, गहिरो र व्यापक छलफल गरे का छन् । ४५ मिने ट लामो से न्टो सा शिखर वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर को रियालाई सुरक्षाको ग्यारे न्टी गरे का छन् । ने ता किम जो ङ उनले को रियाली प्रायद्वीपको पूर्ण आणविक निशस् त्रीकरणको आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता पुनः दो हो ¥याएका छन् । किमले यो सम्झौ तामा अप्रिल २७ को पान्मुन्जो म घो षणापत्रकै प्रतिबद्धततालाई दो हो ¥याएका हुन् । शिखरवार्तामा दुबै ने ताबीच सम्झौ तामा सहीछाप ठो क्ने मात्रै भएन, दुबै ने ताबीचको आत्मीयता निकै रो चकसमे त बने को छ । दुबै ने ता अंकमाल गर्दै विश्व शान्तिको यात्रामा हि‘ड्ने बाचासमे त गरे का छन्  । दुबै ने ताबीचको वार्ताको माहो ल शत्रुताको विदाइ गर्दै विश्व बन्धुत्व र भातृत्वको प्रादुर्भाव गरे को दृष्य निकै महत्वपूर्ण रहे को छ ।
भे टवार्तामा अन्त्यन्तै उत्साहित दे खिएका अमे रिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले को रियाली ने तालाई ह्वाइट हाउसको निम्तो गर्न समे त भ्याए । के ही महिनाअघि मात्रै एक अर्काबिरुद्ध विषवमन गर्दै आक्रामकरुपमा प्रस् तुत भएका किम र ट्रम्प दुबै जुन १२ मा मित्रताको बलियो डो री कस् न भ्याए विश्वलाई चकित पार्दै  । साथै ने ताहरुले आगामी दिनमा संवादलाई निरन्तरता दिने बताउदै शिखरवार्ता सफल र ऐ तिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । शिखरवार्तापछि उत्तर को रियाली ने ता किमले ‘संसारले एउटा मुख्य परिवर्तन दे ख्ने उद्घो षसमे त गर्न भ्याएका थिए ।
दो स्रो विश्वयुद्धपछि शुरु भएको दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा विगतका समयमा अत्यन्तै शत्रुतापूर्ण थियो  । अमे रिकाले एकपक्षीय निशस् त्रीकरणको प्रस् ताव गर्दै युद्धको धम्की दिदै आएको थियो भने उत्तरले त्यसको सिधा जवाफ दिदै आएको थियो  । दुई दे शबीचको तिक्तताले लामो समय को रियाली प्रायद्वीप असाध्यै अशान्त बन्दै आएको थियो  । को रियाली युद्धबाट लाखौ को रियालीहरु प्रताडित भएका छन् । हजारौ ं को रियालीहरुको रगत र आ“सुले को रिया भूमि रक्तरञ्जित बने को छ । अहिले सम्म पनि औ पचारिकरुपमा को रिया युद्ध समाप्त भएको छै न । तर अब विस् तारै युद्धबिरामको अवस् थामा रहे को , विश्वकै सबै भन्दा तनावग्रस् त बनिरहे को को रियाली प्रायद्वीप स् थायी शान्तिको पथमा लम्के जस् तो दे खिएको छ ।
त्रासदीपूर्ण लामो युद्धको पूर्णविरामको संके त
सन् १९०४–१९०५ को रुसी जापानी युद्धपछि यो प्रायद्वीप जापानको संरक्षित क्षे त्र बने को हो  । दो स्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५ मा याल्टा सन्धिअनुसार यस प्रायद्वीपलाई दुई भागमा
टुक्र्याइयो  । उत्तरी भागमा रुसको र दक्षिणी भागमा संयुक्त राज्य अमे रिकाले पकड जमायो  । अगस् त १९४८ मा दक्षिणी भाग गणतन्त्र को रिया बन्यो भने से प्टे म्बर १९४८ मा उत्तरी भाग प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र को रिया बने को हो  । शक्ति राष्ट्रको का“धमा को रिया प्रायद्वीपलाई टुक्रा मात्रै पारिएन को रियाली एक मनलाई युद्धको लप्काले छियाछिया बनायो  ।
को रिया विभाजनपछि सन् १९५० मा शुरु भएको हो को रिया युद्ध । तात्कालीन सो भियत संघ र अमे रिकाको स् वार्थमा को रिया प्रायद्वीपलाई खण्डित बनाइएको हो  । विश्व महाशक्तिको हो डमा रहे का तत्कालीन सो भियत संघ र अमे रिकी स् वार्थमा को रियालाई उत्तर र दक्षिणमा विभाजन गरियो ।
सन् १९५० मा उत्तर को रियाले दक्षिणमाथि धावा बो ल्यो  । अमे रिकाले ‘कम्युनिष्ट’को हमलालाई सामना गर्न भन्दै दक्षिण को रियामा से ना पठायो  । अमे रिकाको सहयो गमा दक्षिण को रियाको राजधानी सियो ल दुई महिनाभित्रै स् वतन्त्र गराइएको थियो  । तर प्रायद्वीपलाई एउटै बनाउनका लागि आफ्नो से ना उत्तर पठाउने अमे रिकाको निर्णयमा चीनले आफ्ना चार लाख से ना को रिया पठायो  । १९५० दे खि ५३ सम्म भएको भीषण युद्धमा अमे रिकाले उत्तर को रियाली भूभागमा लाखौ ं टन बम बर्सायो  । उत्तर को रियाको कुनै पनि भूभागलाई बाकी रहे न अमे रिकी निशानाबाट । संयुक्त राष्ट्र संघको आवरणमा उत्रिएका अमे रिका र उसका सहयो गी दे शका से नाले उत्तर को रियाको भूभागमा उत्पात मच्चाए पनि किम इल सुङ ने तृत्वको को रियाली जनसे नाले प्रतिवाद ग¥यो  । चिनिया“ जनमुक्ति से नाले समे त को रिया युद्धमा हजारौ ं सदस् य गुमायो  । तर युद्धमा न त अमे रिकाले जित्यो , न त चीनसमर्थक को रियाले  । अन्ततः युद्धबिराम भयो  । २७ जुलाई १९५३ मा दुबै पक्ष अस् थायीरुपमा युद्धविरामको सहमतिमा हस् ताक्षर गर्न सहमत भए । आजसम्म पनि यो युद्धविराम मात्र कायम रहे को छ को रियाली प्रायद्वीपमा । ३८ प्यारालल लाईनले उत्तर को रिया र दक्षिण को रियालाई छुट्याइयो  । हजारौ ं किलो मिटर क्षे त्रमा बलियो फो र्टिफिके सनसहितको असै न्यकृत क्षे त्र बन्यो  । आजसम्म पनि को रिया प्राविधिकरुपमा युद्धको अवस् थामै रहे को छ । अमे रिकी राष्ट्रपति डो नाल्ड ट्रम्प र उत्तर को रियाली ने ता किम जो ङ उनबीच मंगलवार सिंगापुरमा भएको ऐ तिहासिक शिखर वार्तापछि भने यो युद्धबिराममा स् थायी शान्तिसम्झौ ताको ढो का खुले को छ ।
विश्व शान्ति र समृद्धिको प्रादुर्भाव
६५ वर्षको बीचमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुको परे ड खे ल्ने स् थान बन्न पुग्यो को रियाली प्रायद्वीप । सबै ले हतियारको प्रतिस् पर्धा गरे खुबै  । आणविक युद्धबाट को रियालाई जो ड्ने वहस चले पनि विश्व राजनीतिमा । तर दुबै को रियाको विवादमा महाशक्ति राष्ट्रहरुले शक्तिको प्रदर्शन गर्न सफल त भए तर लाखौ ं को रियालीले मृत्यु रो ज्नुप¥यो  । लाखौ ं को रियाली नागरिक मारिए, करीब एक लाख बालबालिका आमाबाबुविहीन बने  । करो डौ ं को रियाली नागरिक विस् थापित हुन पुगे  । अस् थायी युद्ध विराम भए पनि युद्धको पूर्णविरामको प्रतिक्षारत छ को रियाली प्रायद्वीप । साढे ६ दशकपछि को रियाली जनता र विश्व जगत को रियाली प्रायद्वीपमा शान्तिको दीप बले को हे र्न आतुर छन् ।
६४ वर्षसम्म दुबै मुलुकबीच जहिले पनि जतिसुकै बे ला पनि युद्ध हुनसक्ने अवस् था सधै ं रह“दै आयो  । विश्व जगत त्राहीमा रह“दै आयो  । तर अप्रिल २७ सन् २०१८ पछि भने यस इलाकामा शान्तिको उषा दे खिन थाले को हो  । विगतको तिक्ततालाई अन्त्य गर्दै त्रासदीपूर्ण युद्धको अन्त्य गर्नका लागि चारबु“दे सम्झौ ता गर्दै विश्व शान्तिको लागि साझा मार्ग को र्न राजी भएका छन् उत्तर को रिया र अमे रिका ।
विगतको युद्धको उन्मादले विश्वको शान्ति र समृद्धि सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाले का यी दुई ने ता से न्टो सा शिखरवार्तामा बस् न राजी भएका थिए । वार्तामा बस् ने मात्रै हो इन विश्वलाई युद्धबाट उन्मुक्ति दिन बाचा गर्न सफल भए । विगतको वै मनस् यता एक सय असी डिग्रीमा फन्को मार्न पुग्यो  । शत्रुताबाट भातृत्वमा उभिन भ्याएका छन् अमे रिकी राष्ट्रपति र उत्तरको रियाली सवोर् च्च ने ता । युद्धको उन्मादले के ही प्राप्त हु“दै न वार्ताको टे बुलबाटै सबथो क प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मिसाल पनि यी दुई ने ताले दिएका छन् ।
६५ वर्षे अमे रिका उत्तर को रियाबीचको लामो समयको तनाव मत्थर बन्ने पक्कापक्की जस् तै भएको छ जुन १२ को शिखरवार्ताले  । दुई को रिया विभाजनपछि बढे को तनावलाई मत्थर बनाउ“दै विश्व शान्तिको प्रादुर्भाव गर्ने प्रयास थाले को छ से न्टो सा भे टले  । १९५३ जुलाइमा गरिएको अस् थायी युद्धविराम ६५ वर्षसम्म टुंगिन सके को छै न । साढे ६ दशक लामो तनावलाई सदाको लागि विदा गर्दै को रिया प्रायद्वीप शान्ति र समृद्धिको विजारो पण गर्ने कडीको रुपमा हे रिएको छ से न्टो सा शिखरवार्तालाई । उत्तर को रियाका संस् थापक ने ता तथा वर्तमान सुप्रिम ने ता किम जो ङ उनका हजुरबुवा किम इल सुङको पालादे खि चर्किएको तनाव ने ता किम जो नले सल्टाउने प्रयास गर्दै छन् । हजुरबाको शासनकालबाट शुरु भएको को रिया प्रायद्वीपको युद्ध किम जो ङले अन्त्य गर्न अमे रिकास“ग सिधा वार्तामा उभिएका छन् । अमे रिकी राजनीतिमा अनुदार मानिएका ट्रम्पसग चारबुदे सम्झौ ताको दस् तावे ज ले ख्न सफल भएका छन् ।
कठो र अमे रिकी नीति गले को छ, अमे रिकी दादागिरी गले को छ । यसका लागि किमले इटाको बदला पत्थर पनि दिन सफल भए कुटनीतिको भाषाबाट पनि टे बलसम्म ट्रम्पसग आमने सामने हुन पनि सके  । सिंगापुरको पर्यटकीय टापु से न्टो साको कापे ला हो टे लमा भएको शिखर वार्तामा सहभागी ट्रम्म निकै उत्साहित दे खिदै उत्तरको सुरक्षास“गै आर्थिक विकासमा साथ दिने उद्घो ष समे त गरे  । यतिमात्रै गरे नन् किमको कटुआलो चक ट्रम्पले ट्याले न्ट यु्वा ने ता भएको तारिफसम्म गर्न आतुर दे खिए से न्टो सा शिखरवार्ता स् थलमा । उता युद्ध नै निकासको अन्तिम माध्यम हो इन भन्ने निष्कर्षमा पुगे का किमले राजनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक अस् त्रको बलमा विश्वभर है कमजमाएको अमे रिकालाई युद्धको धम्कीबाटै जवाफ दिएकै थिए । उत्तरको धम्कीले त्रसित अमे रिका शान्तिको बाटो खो ज्न बाध्य भयो भने उता उत्तरका ने ता किमले युद्धको धम्कीले मात्रै पनि सम्भव छै न भन्ने निष्कर्षमा पुगे कै हुन् । युद्धको विकल्पमा शान्तिको माध्यमबाट पनि क्रूर पश्चिमा शक्तिलाई गलाउन सके विश्व राजनीतिमा सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने बुझे को किम प्रशासन अमे रिकी शासकस“ग सहकार्यको यात्रा शुभारम्भ गरे का छन् से न्टो सा शिखरवार्ताको सि“ढीबाट । अमे रिकी निर्दे शनमा आर्थिक नाकाबन्दी मात्रै हो इन, विश्व राजनीति र आर्थिक सम्बन्धबाट एक्लाइए पनि उत्तर को रिया डगे न । तर शक्ति राष्ट्रका अगाडि आफूलाई हतियारले बलियो भएको सावित गरे को दे खियो  । साढे ६ दशक लामो तनावपछि युद्धको शिक्षाले हतियारमा उत्तर बलियो त दे खियो तर शासन प्रशासनमा उत्तरले प्रगति गर्न सके न । स्रो त साधनमा युद्धको प्रवद्र्धन लागे पछि उत्तर आर्थिक विकास गर्न सके न । विकासलाई नयॉ उचाइमा प¥याउनको लागि शक्तिस“गै प्रविधि र पू“जीको पनि विकास गरिनु आवश्यक छ भन्ने निक्र्याे ल गरी वार्तामा आउन सके को हो  । अन्ततः युद्ध समस् याको अन्तिम समाधान हो इन भन्ने निक्र्याै ल निकाले का दुबै दे श शान्ति वार्ताको मार्गमा हिड्न तयार भएका छन् । जुन विश्व जगतमा नया“ र फलदायी परिघटना हो  । नया“ परिघटनाले विश्व जगतमा शान्ति र अमनचै नलाई लयमा लक्ष्न मद्दत गर्ने छ । यसर्थ दुबै दे शको वार्ताले सकारात्मक सन्दे श दिएको छ । विश्व शान्तिको प्रादुर्भाव भएको यो क्षणलाई समग्र विश्वको समृद्धिको राजमार्गमा डो ¥याउन अब सकियो स् ।
Previous: सरकारी सांसदकै बिरोध बढ्दै
Next: मानवीय मूल्यको खडेरी